China Fithem ks-016 ကြိုးမဲ့စတီရီယိုကြိုးလက်ကိုင်ဘလူးတုသ် Chip 5.0 အားကစားနားကြပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Kaiwansi
1. ks-016 ထုတ်ကုန်နိဒါန်း
အားသွင်းခြင်းတစ်ခုတည်းတွင်အားကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်းသည်သံလိုက်စုပ်ယူနိုင်မှု nano သည် Bluetooth 5.0 မြန်သောဂီယာအပြည့်ဖြင့်အသံနှင့်နားကြားခံစားခြင်းကိုနှစ်ခြိုက်ရန်ငြင်းဆန်သည်။ ဘက်ထရီစနစ်သည်ကြာရှည်စွာကစားနိုင်သည်။
2. ks-016 parameter သည်
Bluetooth ဗားရှင်း V5.0
အသုံးပြုချိန် 6-8 နာရီ
အချိန်အားသွင်းသည် ၁-၁.၅ နာရီ
အဆင်သင့်အချိန် နာရီ ၁၅၀
၃။ Ks-016 ၏ထူးခြားချက်များနှင့် application များ
ရှေ့ - ကြိမ်နှုန်းဒီဇိုင်းသည်တုန်ခါမှုပြreduနာများကိုလျော့နည်းစေသည်၊ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းသည် ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ လူ့အသံသည်ပိုကောင်းသည်၊ ဂီတ၏ကျက်သရေကိုခံစားနိုင်သည်။ တောက်ပသောအသံကိုပြန်လည်ရရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းပြည့်သည်၊ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းသည်အထူနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။
4. Ks-016 ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
မှတ်ဉာဏ်လည်ပင်းကြိုးသည်ကွေးညွှတ်။ ကွေးနိုင်သည်။ အဆိုပါကော်လာကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရည် silicone ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကလေး၏အရေပြားကဲ့သို့နူးညံ့။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးတည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော။ ၎င်းသည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအားသွင်းနိုင်ပြီးအားကြီးသောဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသည်။ မှတ်စုတိုင်းသည်ရှင်းပါသည်။
5. ကြွယ်ဝသောဘေ့စ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်များကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုပြီး၊ ကြွယ်ဝသော Mezzo သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလည်ပတ်မှုကသုံးစွဲသူများကိုလွယ်လွယ်ကူကူခံစားစေနိုင်သည်။ အသံအရည်အသွေးသည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု၏အဆင့်တွင်ပင်ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှာ ၁၁၀mAh ဖြစ်သည်။ ၁၂ နာရီထုတ်လွှင့်နိုင်သည်ဘက်ထရီသည်အလွန်လုံခြုံသည်။ ထုတ်ကုန်တွင်လည်းအတိုင်းအတာအချို့ရှိသည်။ အာမခံအဖြစ်, သင်တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုကြသည်။
နောက်တစ်ခု: Fithem ks-020 ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့နားကြပ်သူဌေးသားလှေအပန်းဖြေအားကစားနားကြပ်
FITHEM KS-017 ကြိုးမဲ့နားကြပ် Bluetooth headp ...
FITHEM KS-015 ကြိုးမဲ့နားကြပ်သံလိုက်စက်ကွင်း ...
FITHEM KS-010 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ဖြင့် ...
Fithem Ks-009S ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ဂိမ်းကစားခြင်း ...